Maxammuud Ciise Xaaji Muxammad (Maareeye) – GIBF
Maxammuud Ciise Xaaji Muxammad (Maareeye) Author @ Scholar
Qooraga Maxammuud Ciise Xaaji Muxammad(Maareeye) Waxa uu ku dhashay magaalada Qardho sannadku markii uu ahaa 1979, Barashada Qur’aanka iyo wax barashadiisa asaasiga ah ba waxa uu ku qaatay isla magaalada Qardho,kadib kala go’wax baraho oo uu burburku sababay ,waxa uu sannaddadii sagaashannadii kasoo shaqeeyay ganacsiyo yaryar oo uu lahaa.
Sannadkii 1999 ayuu nasiib u yeeshay in’uu dib u bilaabo wax barashadii dugsiga sare ee Sheekh Cismaan Cumar isagoo dhammeeyay sannadkii 2003dii. Sannad dugsiyeedkii 2004-2005 waxa uu kasoo shaqeeyay isla dugsii uu kasoo baxay waxana uu kasoo noqday bare waqti baran.
Intaas ka dib sannadkii 2006 dii ayuu wax barasho sare u aaday dal weynaha India isagoo ka bilaabay kulliyadda ganacsiga iyo wershadaha (B. Com & I) jaamacadda Osmania University waxana uu ka qalin jebiyay sannadkii 2009 ,sannadkii 2010 ayuu hadda is qoray jaamacadda heerka labaad isagoo soo diyaariyay Maammulka ganacsiga (Master of Business Administration ) waxana uu dhammeeeyay Bishii Oktoobar sannadkii 2012 kii. 2013 ayuu dalka dib ugu soo laabtay waxana uu ka shaqo bilaabay Jaamacadda Bariga Afrika,kulliyadda ganacsiga .
Hadda waxa uu ku noolyahay magaalada Garowe, caasimadda Puntland.